DEG-DEG: Tababarihii Xulka Netherlands Oo Iscasilay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Tababarihii Xulka Netherlands Oo Iscasilay
DEG-DEG: Tababarihii Xulka Netherlands Oo Iscasilay
Tababaraha xulka qaranka Netherlands/Holland ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay shaqada xulka qarankiisa, kaddib markii ay si niyad-jab ah kaga hadheen tartanka Euro 2020 oo ay wareegga 16ka ku garaacday Czech Republic.
Frank de Boer oo heshiis laba sannadood ah la siiyey markii uu bishii September ee sannadkii hore uu shaqada ka beddelay tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa qaatay go’aan ah in aanu waddankiisa tababare u noqonin Koobka Adduunka 2022 lagu qabanayo Qatar, waxaanu sheegay in ay u baahan yihiin qof kale oo fikrado firfircoon la yimaadda.
Netherlands oo ka mid ahayd waddamada loo saadaalinayey inay ku guuleysanayaan tartanka Euro, kaddib markii ay saddexdii kulan ee Groups-ka soo wada badiyeen, ayaa waxa si lama filaan ah 2-0 ugu garaacday Czech Republic oo ay isku beegmeen wareeggii 16ka.
Frank de Boer oo ay da’diisu tahay 51 jir ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray, waxa uu ku yidhi: “Kaddib qiimayn, waxa aan go’aansaday in aanan sii wadin xulka qaranka. Hadafkii lama gaadhin, wayna caddahay.
“Markii aan noqonayay tababaraha xulka qaranka 2020, waxa aan ku fikirayay inay tahay sharaff iyo loolllan, laakiin waxa kale oo aan ka war-qabay cadaadiska ay isoo korayay isla marka la i magacaabo, cadaadiskaasi kaliya wuu sii kordhay hadda taasina iima aha xaalad caafimaad ii ah, amaba u wanaagsan xulka qaranka kulamada muhiimka ah ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 20222.”
Xidhiidhka kubadda cagta Netherlands ayaa hadda raadin doona tababare cusub iyadoo uu soo aaddan yahay Koobka Adduunka 2022 iyo sidoo kale kulamo muhiim ah oo isreeb-reebka Koobka Adduunka ah.